महाधिबेशन प्रतिनिधि बिबाद समाधान नगरेर गरिने एनआरएनए चुनावले संस्थामा झन बिबाद बढाउछ - चारदिशा
December 7, 2021 चारदिशा समाज
एनआरएनए अभियन्ता तथा कानूनविदहरुले डेलिगेट्स विवाद समाधान गरेर गराइने कथित चुनाव वैध नहुने बताएका छन्।
उनीहरुले संघका अधिकांस सदस्यहरुको भावना विपरित जबर्जस्ति गराउन खोजिएको चुनावले संघ विभाजन तर्फ जाने चेतावनी पनि दिएका छन्।
जीएनएन नेटवर्कद्वारा मंगलबार आयोजित बहसमा बोल्दै एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष अधिवक्ता नारायण कँडेलले अदालतले अधिवेशन गर्ने बाटो खोलेको तर, विधान मिच्ने, मनलाग्दी प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार नदिएको बताए ।
पाटन उच्च अदालतको आदेश अन्तिम विन्दु होइन । त्यस भन्दा अगाडी अरु पनि बाटो भएको उनले बताए । अदालतले मेरिटमा प्रवेश गरेर अध्ययन नगरेको कँडेलले बताए ।
‘कुनै उम्मेदवार, पदाधिकारी वा कुनै निकायले लहडका भरमा नांगै नाच्ने प्रयास गर्छ भने हामीले कपडा देखाइदिने काम गर्छौ । हामी पनि अदालतका ढोका देखेका छौं,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो खेलको खेलाडी कुमार पन्त मात्रै हो ? उच्च अदालत मात्रै रेफ्री हो ? उनले त्यस विरुद्ध अदालतमा जान सकिने संकेत गर्दै एनआरएन<ए सबैको संस्था भएकाले नफुट्ने बताए । वास्तविक प्रतिनिधिले भाग नलिएको चुनावले कुनै पनि मान्यता नपाउने बताए ।
‘गत जनवरी २०२१ मा पारित संशोधन सहितको संघको विधानमा ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान कार्य समितिले गर्ने भनेर लेखेको छैन । पछि नियमावलीमा जबर्जस्ती थपिएको हो’ डा श्रेष्ठले भने । कार्यकाल सकिएको कुमार पन्तको समुहले विधानमा लेखिएका कुरा क्रियाशील हुन नदिएको उनले बताए ।
‘प्रतिनिधि हुन पाउने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएकाले एनआरएनको विधान अनुसार सच्चाएर चुनाव गर भनेको छ । निर्वाचन नगराउनु भनेर लेखिएको छैन । २०२१ भित्रैमा अधिवेशन गराउन मन्त्रालयले भनेको छ,’ उनले भने । विधान, नियम निस्कृय भएपछि संस्था विभाजनतर्फ जान सक्ने उनले बताए । निस्कृय भएको संस्थालाई सक्रिय बनाउन अभिभावकत्व भूमिका खेल्न संरक्षक परिषदलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको बताए । बिधानत अहिले पन्तले प्रशासनिक काम बाहेक अरु कुनै काम गर्न नसक्ने बताए ।
एनआरएनए अमेरिका पूर्व अध्यक्ष डा केशव पौडेलले जबर्जस्ती बलमिच्याइँ गरेर संस्था कब्जा गर्न खोजिएको र अनेक जालझेल, तिकडम गरेर, अन्यौलमा पारेर, भुलभुलैयामा पारेर चुनावको नाटक गरिएको बताए। ‘संस्थाको साख गिरेको हेर्ने कि विद्रोह गर्ने ? भ्रमको खेती गरेर सहमतिको कुरा गरेर झुठा आश्वासन दिएर यस अघि पनि प्रभावमा पारिएको थियो ।
हायातमा भएको धादलीमा सिस्टम अनुसार गर्छौ भनेर पछी आफु चुनाव जित्न संस्थाको साख गिर्ने गरि जबर्जस्ती चुनावएे नाटक गरिएको, बिशेष महाधिबेशनमा पनि आफु चुनाव जित्ने गरि ६५ प्रतिशतका प्राब्धान राखिएको र संस्थानै टुक्रने अवस्था आए पछि स्विकार गरिएकोमा त्यस पछि पनि नियमावली बनाउदा आफु अनुकुल हुने गरि नियमावली बनाइएको हुँदा अब यस खालका जबर्जस्ती र धादलीलाई नस्विकार्ने र नझुक्किने उनले बताए ।
पत्रकार ओम शर्माले संचालन गरेको कार्यक्रमको भिडियो यो लिंकमा गएर हेर्न सकिन्छ